Cycloastragenol (CAG) ထို့အပြင် T-65 ဟုလူသိများသည့်သဘာဝ tetracyclic triterpenoid သည် Astragalus membranaceus အပင်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Astragalus membranaceus ထုတ်ယူခြင်းသည်၎င်းကိုတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
Cycloastragenol ကိုလည်း Astragaloside IV မှ hydrolysis action ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Astragaloside IV သည်အဓိကပါဝင်သောအရာဖြစ်သည် Astragalus membranaceus ပျိုးပင်။ Cycloastragenol နှင့် Astragaloside IV တို့သည်သူတို့၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆင်တူသော်လည်း cycloastragenol သည် Astragaloside IV ထက်မော်လီကျူးအလေးချိန်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် Cycloastragenol သည်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ bioavailability နှင့်ထို့ကြောင့် cycloastragenol ၏ဇီဝြဖစ်မှုကြောင့်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။ cycloastragenol ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသည် passive diffusion မှတဆင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ epithelial တွင်မှတ်သားထားသည်။
အာရာဂဂါဆေးပင်ကိုတရုတ်ရိုးရာဆေးပညာအဖြစ်ရာစုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးယနေ့လည်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ Astragalus စက်ရုံကို၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ၊ ရောင်ရမ်းမှုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ခြင်းစွမ်းရည်များကြောင့်အသုံးပြုသည်။
CAG သည်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးအင်ဇိုင်းတယ်လီမာရေ့စ်နှင့်ဒဏ်ရာများကိုကုသပေးသည်။ ၎င်းသည်လူတို့၏ telomerase ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cycloastragenol ကို telomerase activator ဟုသတ်မှတ်သည်၊ ၎င်းသည် telomeres များ၏အရှည်ကိုတိုးစေနိုင်သည်။ Telomeres ဆိုသည်မှာခရိုမိုဆုန်း၏အဆုံး၌ဘေ့စ်ဘေ့စ်အနေဖြင့်ပါဝင်သောအကာအကွယ်အဖုံးများဖြစ်သည်။ ဆဲလ်ခွဲစိတ်မှုပြီးတိုင်းဆဲလ်သက်ကြီးရွယ်အိုများပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သော်ဤတယ်လီနောများသည်တိုတောင်းလာသည်။ ထို့အပြင် telomeres ကိုလည်း oxidative စိတ်ဖိစီးမှုများကတိုစေနိုင်ပါတယ်။
Telomeres များကိုဤကဲ့သို့အလွန်တိုစေခြင်းသည်အိုမင်းခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် ag နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါအချို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, telomerase အင်ဇိုင်းသည်ဤ telomeres များ၏အရှည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Cycloastragenol ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းကိုသက်သေပြရန်ကျယ်ပြန့်သောလေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးနိုင်သည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောလိုင်းများနှင့်အရေးအကြောင်းများအပါအဝင်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုဖယ်ရှားရန်သက်သေပြခဲ့သည်။ CAG သည်ပါကင်ဆန်ကဲ့သို့သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အန္တရာယ်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်။
များစွာသောနေသော်လည်း cycloastragenol ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၎င်းသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည့်စိုးရိမ်မှုများရှိသည်။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုအချို့သည်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိပဲ cycloastragenol ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြသည်။
ရောင်းရန် Cycloastragenol အမှုန့်ကိုအွန်လိုင်းအလွယ်တကူရရှိပြီးလူသိများသော cycloastragenol ပေးသွင်းသူများထံမှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
များစွာသော cycloastragenol ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသသော်လည်းလေ့လာနေဆဲအဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် cycloastragenol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအလွန်ရှင်းလင်းသောမဟုတ်, ဤအရပ်မှသတိနှင့်အသုံးပြုသင့်သည်။
Cycloastragenol သည် Astragalus ပျိုးပင်၏အမြစ်မှဆင်းသက်လာသည့် triterpenoid saponin ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Astragalus membranaceus အပင်ကိုတရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ (TCM) တွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးဆေးဖက်ဝင်အပင်များအတွက်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။
အာကာသစိမ်းလန်းသောအပင်သည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အခြားကျန်းမာရေး anti-hypersensitivity၊ antibacterial၊ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ Anti-အိုမင်း နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု anti- အကျိုးကျေးဇူးများကို။
လေ့အဖြစ်လူသိများ Cycloastragenol TA-65 ဒါပေမယ့်လည်း Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin နှင့် Astramembrangenin အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ Cycloastragenol နောကျဆကျတှဲ အများအားဖြင့်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အရာအဖြစ်လူသိများသည်။ သို့သော်အခြား cycloastragenol ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများပါဝင်သည်။
Cycloastragenol နှင့် Astragaloside IV
cycloastragenol နှင့် Astragaloside IV နှစ်မျိုးလုံးသည် astragalus အပင်မှထုတ်ယူသောသဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Astragaloside IV သည်အဓိကပါဝင်သောအရာဖြစ်သည် astragalus membranaceusသို့သော်အမြစ်တွင်မိနစ်အနည်းငယ်မျှတွေ့ရှိရသည်။ ဤ saponins များ၊ cycloastragenol နှင့် astragaloside IV ကိုထုတ်ယူခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လိုအပ်သောသန့်စင်သောအဆင့်တွင်ရှိသောကြောင့်ခက်ခဲသည်။
နှစ်ဦးစလုံးနေစဉ် cycloastragenol နှင့် astragaloside IV astragalus ပျိုးပင်မှဆင်းသက်လာသည်။ cycloastragenol ကိုလည်း astragaloside IV မှ hydrolysis ဖြစ်စဉ်မှရရှိနိုင်သည်။
ဤဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးသည်အလားတူဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်၊ သို့သော် cycloastragenol သည်မော်လီကျူးအလေးချိန်သည် astragaloside IV ထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးဇီဝရရှိနိုင်သည်။
Telomeres များသည် linear ခရိုမိုဆုမ်း၏အစွန်းတွင်ဘေ့စ်ကိုဘေ့စ်အနေဖြင့်ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးပရိုတိန်းအချို့ကိုချည်နှောင်ထားသည်။ Telomeres သည်ဆဲလ်တိုင်းနှင့်ကွဲပြားစွာသဘာဝကျသည်။ Telomerase၊ ribonucleoprotein ရှုပ်ထွေးသောဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် catalytic reverse transcriptase enzymes (TERT) နှင့် telomerase RNA component (TERC) တို့ပါဝင်သည်။ Telomeres ၏အဓိကအခန်းကဏ္chမှာခရိုမိုဆုန်းများအား fusion နှင့် degradation မှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သောကြောင့်ဆဲလ်များသည်များသောအားဖြင့်အလွန်တိုတောင်းသော telomeres များကိုပျက်စီးနေသော DNA အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
Cycloastragenol telomerase activation သည် telomeres ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေပြီးအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်။
ii ။ lipid ဇီဝြဖစ်ပျက်စေတယ်
Lipids သည်သဘာဝအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ lipids များလွန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Cycloastragenol သည် lipid ဇီဝြဖစ်စဉ်ကို biomarkers အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ကျန်းမာသော lipid ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ပထမ ဦး စွာအနိမ့်ဆေးများမှာ CAG 3T3-L1 adipocytes အတွက် cytoplasmic lipid မျက်ရည်စက်လေးတွေလျော့နည်းစေသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဆေးပမာဏမြင့်မားစွာအသုံးပြုသောအခါ CAG သည် 3T3-L1 preadipocytes ၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုဟန့်တားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CAG 3T3-L1 preadipocytes အတွက်ကယ်လစီယမ်စီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသော intracellular ကယ်လစီယမ် adipocytes ကွဲပြားခြားနားမှုဖိနှိပ်နိုင်သောကြောင့်, CAG ကယ်လစီယမ်၏စီးဆင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် lipid ဇီဝြဖစ်အတွက်ချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကိုတတ်၏။
iii ။ ဓါတ်တိုးလှုပ်ရှားမှု
Oxidative stress သည်ရောဂါများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီးဆဲလ်များအသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အခမဲ့အစွန်းရောက်များပိုလျှံသည့်အခါအောက်ဆီဒိုက်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်သည်။
Cycloastragenol သည် antioxidant capacity တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် anti-oxidative ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသသည်။ ဤသည် antioxidant လှုပ်ရှားမှု CAG တွင်တွေ့ရသော hydroxyl အုပ်စုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် oxidative stress သည် telomere ကိုတိုစေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သဖြင့် CAG telomere protection သည် antioxidant activation နှင့် telomerase activation တို့မှရရှိသည်။
ရောင်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားရောဂါကူးစက်ခြင်း (သို့) ဒဏ်ရာများကိုတိုက်ဖျက်သောသဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သောအဆုတ်အအေးမိ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အဆစ်စသောရောဂါများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Cycloastragenol အမှုန့်သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ cycloastragenol ၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများမှာ Lymphocytes proliferation ကိုဟန့်တားခြင်းနှင့် AMP-activated protein kinase (AMPK) phosphorylation ကိုတိုးတက်စေခြင်းအပါအဝင်နည်းလမ်းများစွာအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Cycloastragenol သည် T lymphocyte ၏ပြန့်ပွားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ Telomerase ကိုတက်ကြွစေနိုင်သော cycloastragenol ဖြည့်စွက်ဆေး၏စွမ်းရည်သည်၎င်းကိုတိုးတက်မှုနှင့် telomere ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့် DNA ပြုပြင်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ii ။Cycloastragenol နှင့်အိုမင်းခြင်း
Cycloastragenol anti- အိုမင်းခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများယနေ့အများဆုံးသုတေသန၏အဓိကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြသည်။ CAG သည်လူများတွင်အိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည့်အပြင်အရေးအကြောင်းများနှင့်လိုင်းကောင်းများကဲ့သို့အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်ညွှန်ပြထားသည်။ Cycloastragenol anti-aging လုပ်ဆောင်မှုကိုကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားလေးခုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါ cycloastragenol anti- အိုမင်းယန္တရားများပါဝင်သည်;
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် free radicals နှင့် antioxidant အကြားမညီမမျှဖြစ်သည့်အခါ oxidative stress သည်သဘာဝကျပါသည်။ အကယ်၍ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက oxidative stress သည်အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်သာမကနာတာရှည်အခြေအနေများဖြစ်သောကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Cycloastragenol astragalus ထုတ်ယူ အလွန်ကောင်းသော antioxidant ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသဘာဝရှိ antioxidants စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေပြီးအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
Cycloastragenol သည် telomerase activator အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်
အပေါ်ကအခန်းတွင်လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း cycloastragenol သည် telomeres များကိုရှည်စေပါသည်။ အိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းဖြင့်ဆဲလ်များကို ဆက်လက်၍ ခွဲဝေရာတွင်သေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ကူညီသည်။
လူတစ် ဦး သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ပါကခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်များပျက်စီးနိုင်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပုံ - အိုမင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အချိန်မတန်မီအိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Cycloastragenol ပရိုတိန်း glycation တားစီး
Glycation သည်ဂလူးကို့စ် (သို့) ဂလူးကို့စ် (fructose) ကဲ့သို့သကြားဓာတ်သည် lipid (သို့) ပရိုတိန်းတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Glycation သည်ဆီးချိုရောဂါအတွက် biomarkers တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုမင်းခြင်းနှင့်အခြားသောရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Cycloastragenol ဖြည့်စွက် glycation ထုတ်ကုန်များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတားဆီးခြင်းဖြင့် glycation ကြောင့်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
iii ။Cycloastragenol ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ -
Cycloastragenol ကင်ဆာကုသနိုင်စွမ်းကိုကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဓာတုကုထုံး၏အန္တရာယ်ရှိသောတုံ့ပြန်မှုများမှကာကွယ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပြသည်။
ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူလူများ၏လေ့လာမှုမှာ cycloastragenol ကင်ဆာ သေဆုံးမှုကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြင့်ကုသမှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
နှလုံးပျက်စီးခြင်းနှင့်ကြွက်များကိုလေ့လာရာ၌ cycloastragenol ဖြည့်စွက်ဆေးသည် myocardial ဆဲလ်များ၌ autophagy ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့်နှလုံး metallfroteinase-2 (MMP-2) နှင့် MMP-9 တို့၏ဖော်ပြချက်များကိုဖိအားပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သာ. ကောင်း၏ အိပ်
cycloastragenol ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, တတျနိုငျသ အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေ။ သို့သော်အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည့်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြmoodနာများနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများခံစားနေရသူများတွင်တိုတိုတယ်မိုရီကိုအတိုချုပ် telomere ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကြွက်များကိုအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၇ ရက်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သော cycloastragenol ဖြည့်စွက်ဆေးသည်၎င်းတို့၏ရွေ့လျားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အာရုံခံဆဲလ်များနှင့် PC7 ဆဲလ်များတွင် telomerase ကိုသက်ဝင်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အနာသည်အနာပျောက်စေသောဆီးချိုလူနာများတွင်အဓိကပြissueနာဖြစ်သည်။ ဤအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောဖြစ်စဉ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်များစွာမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြသည် ရောင်ရမ်းလှုပ်ရှားမှု, ခဲ, epithelium ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပင်မဆဲလ်များ၏စည်းမျဉ်း။ ဤ epithelial ပင်မဆဲလ်များသည်ဆီးချိုဒဏ်ရာများကိုကုသရာတွင်အရေးပါသည်။
Telomere degradation သည်အနာများကိုကုသခြင်းကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသသည်။ cycloastragenol အမှုန့်သည်ဤသည်တိုတောင်းသော telomere ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်ပင်မဆဲလ်များ၏ပြန့်ပွားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လာသည်။ ဤသည်အလှည့်အစာရှောင်ခြင်းအနာပြုပြင်ကူညီပေးသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုသူများမှ Cycloastragenol ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက cycloastragenol သည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဆံပင်အရောင်ကိုတိုးတက်စေခြင်းများကိုပြသသည်။
ပိုများသော cycloastragenol astragalus ထုတ်ယူအကျိုးကျေးဇူးများကိုပါ၏
လူ့ CD4 + ဆဲလ်များကိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
စံ cycloastragenol သောက်သုံးသော နေ့စဉ် 10 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကတည်းကတစ် ဦး မျှမျှတတအသစ်သော နောကျဆကျတှဲ ၎င်းဆေးသောက်သုံးမှုသည်အသုံးပြုမှု၊ အသက်နှင့်အခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေများအပေါ်များစွာမူတည်သည်။
ဤပုံမှန် cycloastragenol သောက်သုံးသောလုံလောက်သော telomere elongation နှင့်အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးအောင်မြင်ရန်နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်တိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။
Cycloastragenol အမှုန့်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အချို့သောသောက်သုံးသောပမာဏတွင်လုံခြုံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော်ထိုသို့မျှမျှတတအသစ်သောကတည်းက နောကျဆကျတှဲ ဖြစ်နိုင်သော cycloastragenol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမသိသေးပါ။
Cycloastragenol ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ cycloastragenol ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအနည်းငယ်သည်၎င်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးပြုရန်ခိုင်လုံစေရန်လုံလောက်သောနိဂုံးချုပ်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင် cycloastragenol ဖြည့်စွက်အကျိတ်များ၏ကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်အားဖြင့်ကင်ဆာအရှိန်မြှင့်နိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်။ ၎င်းသည် cycloastragenol ၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုသည် telomere elongation မှတဆင့်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို အခြေခံ၍ သီအိုရီဆိုင်ရာထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုယူဆနေသည်။
ထို့ကြောင့်ဤထင်မြင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျမရရှိနိုင်သည့်အချိန်အထိမည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျမဆို cycloastragenol အဆိပ်ကိုရှောင်ရှားရန်ကင်ဆာလူနာများကို cycloastragenol ကိုမပေးရရန်အကြံပြုလိုသည်။
အကောင်းဆုံး Cycloastragenol ကိုဘယ်ကရနိုင်မလဲ။
ကောင်းပြီ, ရောင်းရန်အတွက် cycloastragenol အမှုန့် အွန်လိုင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအာဟာရဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သို့သော်သင်အလွန်သန့်စင်သော cycloastragenol ရရှိရန်သေချာစေရန်၊ အတည်ပြုပြီးနာမည်ကြီးသော cycloastragenol ပေးသွင်းသူများထံမှရောင်းချရန် cycloastragenol အမှုန့်ကိုအမြဲတမ်းသုတေသနပြုပါ။
Cycloastragenol အမှုန့်အများအပြားအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများနှင့်ပိုပြီးဒီတော့ cycloastragenol ဆန့်ကျင်အိုမင်းဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုင်ဆိုင်ရန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Cycloastragenol telomerase activation သည်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအများအပြားမော်ဒယ်များနှင့်လည်းအနည်းငယ်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည် နင် လေ့လာမှုများ။
ရှည်လျားသော telomere အပေါ် cycloastragenol astragalus ထုတ်ယူအကျိုးသက်ရောက်မှု၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများပေးရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
TA-65 ၏နှလုံးကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အလားအလာရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ TA-65 လုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောလေ့လာမှုများမှာအလွန်နည်းပါးသည်။
cycloastragenol ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းသည်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များတိုးတက်လာခြင်းအပြင်အလွန်အကျွံစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်မည်သည့် cycloastragenol အဆိပ်သင့်မှုကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။
သတ်မှတ်ထားသောအကျိုးကျေးဇူးများအတွက် cycloastragenol ဖြည့်စွက်၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ။ Cycloastragenol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမသိသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးဖြတ်ရန်သုတေသနကိုညွှန်ကြားသင့်သည် cycloastragenol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အခြားဆေးဝါးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။
Cycloastragenol ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်၎င်း CAG လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အခြေခံယန္တရားများကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်သင့်လျော်သော cycloastragenol သောက်သုံးသောမတူညီသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏကိုလေ့လာရန်ပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ မတူညီသော cycloastragenol ပေးသွင်းသူများသည်သုတေသနမှတစ်ဆင့်သင့်လျော်သောဆေးပမာဏကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။
Yuan Yao နှင့် Maria Luz Fernandez (၂၀၁၇) ။ “ Telomerase Activator (TA-2017) ၏နာတာရှည်ရောဂါ၏အကျိုးကျေးဇူးများ” EC အာဟာရ 65: 6.5-176 ။
ဝမ်, ဂျေ, ဝူ, M.-L. , Cao, S.-P. , Cai, အိပ်ချ်, Zhao, Z.-M. , & သီချင်း, Y.-H. (2018) ။ Cycloastragenol သည် AKT1-RPS6KB1 အချက်ပြမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့် myocardial autophagy ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ကြွက်များတွင်နှလုံးရောဂါစမ်းသပ်မှုကိုသက်သာစေသည်။ ဇီဝဆေးပညာ & Pharmacotherapy, 107, 1074-1081 ။ Doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Sun က, C တို့, Jiang, အမ်, Zhang က, အယ်လ်, ယန်, ဂျေ, Zhang က, G. အ, ဒူ, ခ, ... Yao, ဂျေ (2017) ။ Cycloastragenol သည် concanavalin A-induced mouse mouse Lymphocyte pan-activation မော်ဒယ်လ်တွင် activation နှင့် proliferation suppression ကိုကမကထပြုပေးသည်။ Immunopharmacology နှင့် Immunotoxicology, 39 (3), 131-139 ။ Doi: 10.1080 / 08923973.2017.1300170 ။
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, ချင်းအေ, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y ကို: Cycloastragenol သည် Neuronal Cells တွင်စွမ်းရည်ရှိသော Telomerase Activator တစ်ခုဖြစ်သည် - စိတ်ကျရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neurosignals 2014; ၂၂: ၅၂-၆၃ ။ Doi: 22 / 52 ။
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu (2018) ။ Cycloastragenol - အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဝတ္ထုသစ်တစ်မျိုး (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း) ။ စမ်းသပ်နှင့်ကုထုံးဆေးပညာ။ 16. 10.3892 / etm.2018.6501 ။
CYCLOASTRAGENOL ဖုန်မှုန့် (78574-94-4)
2. Cycloastragenol ဆိုတာဘာလဲ။
Cycloastragenol ၏လှုပ်ရှားမှု၏ 3. ယန္တရား
Cycloastragenol ၏ 4.Benefits
6. Cycloastragenol ဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား။
၇။ အကောင်းဆုံး Cycloastragenol ကိုဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါသလဲ။